Shiinaha Casserole in Qaab Round SKU NO.271-272-273-274-275-276-saareyaasha iyo Shirkado cusub | SJZ JINXUAN
Gaarka ah Jikada-to-Table miday casserole galaas ayaa si fudud loo kariyo cuntada ka hor waqtiga iyo dukaanka qaboojiyaha ama qaboojiyaha dambe. Best of dhan, guurka casserole u qurux badan ka soo foornada miiska kasta dejinta for qaadasho bilicsan, iyo hadhaaga tegi karo daafaca midig ee qaboojiyaha dhamaadka habeenkii. Fadlan Ogsoonow: HA si toos ah u guurto casserole galaas ka qaboojiyaha in foornada. Ha dhalaalid cunto hor inta aadan karin ama reheating foornada. U hubso in aad isticmaasho potholder ah marka ...
casserole galaas ayaa si fudud loo kariyo cuntada ka hor waqtiga iyo dukaanka qaboojiyaha ama qaboojiyaha dambe. Best of dhan, guurka casserole u qurux badan ka soo foornada miiska kasta dejinta for qaadasho bilicsan, iyo hadhaaga tegi karo daafaca midig ee qaboojiyaha dhamaadka habeenkii.
Fadlan Ogsoonow: HA si toos ah u guurto casserole galaas ka qaboojiyaha in foornada. Ha dhalaalid cunto hor inta aadan karin ama reheating foornada. U hubso in aad isticmaasho potholder ah marka galaas kulul.
casserole galaas waxaa loo isticmaali karaa in ay ku dubi ama kululay cunto foornada a caadiga ah ama in microwave ka. Fiiri iyada oo dhinac galaas ogolaanayaan effortlessly kahadlay at horumarka cuntooyinka markii dubista, bixinta gacanta ku daray in ka badan natiijada kama dambaysta ah.
dhariga waxay ka kooban yihiin koob-fiican ee ballaarinta kaamerada oo sidaas daraaddeed ka yar u nugul in ay u burburaan markii loo feydo kulka isbedel borosilicate.
Fadlan Ogsoonow: Glass casserole waa in aan la isticmaali hoos solay ah, on stovetop ah, ama aalkolo ama ololka kulaylka qasacadaysan sida il kulayl toos ah.
ka qabtaa Side
kooxda Integrated qabtaa ogolaan waayo, si ammaan ah u qaadeen casserole muraayadda gudaha iyo dibedda ee foornada iyo jikada si miiska cuntada qol ama reerkeyga iyo mar kale dib. The gacanta kooxda ku haboon sidii loo hubiyo qabtay aamin ah, xitaa marka xiran tinaarka qaro weyn.
Previous: Casserole in Qaab Oval SKU NO.277-278-279-2710-2711
Next: Jasper midabka leh Borosilicate Glass SKU NO.2670
Casserole in Qaab Oval SKU NO.2712
Casserole in Qaab Round SKU NO.272D
Casserole in Qaab Round SKU NO.274D
Casserole in Qaab Oval SKU NO.277-278-279-2710 ...
Casserole in Qaab Round SKU NO.273D
Borosilicate Glass Casserole , Double Walled Tea Glass, Borosilicate Glass Cuntada Weelasha , Borosilicate Glass Cuntada Weelka , Borosilicate Glass Bakeware , Borosilicate Glass Pot,